Isiqinisekiso seMidiya yoLuntu kunye noQeqesho
I-Agorapulse Academy: Fumana isiQinisekiso kwiMidiya yoLuntu
Ngaphezulu kweshumi leminyaka, ndingumsebenzisi wamandla kunye nommeli welizwe I-Agorapulse. Unganqakraza kwinqaku elipheleleyo, kodwa ndiza kuphinda nditsho ukuba lelona qonga lolawulo losasazo loluntu lulula kwimarike. I-Agorapulse idityaniswe ne-Twitter, i-Facebook, iphepha le-Facebook, i-Instagram, kunye ne-YouTube.
Inkampani iyamangalisa, nayo, ibonelela ngokuhamba rhoqo kweengcebiso, amacebo kunye nezixhasi ukusukela oko yaqalwa. Esinye isixhobo esimnandi uAgorapulse anaso sisikolo sabo apho bakunika khona ikhosi yesiqinisekiso ebandakanya ukupapashwa kwezentlalo, ulawulo lweendaba zosasazo, ukumamela imithombo yeendaba kwezentlalo, kunye nengxelo yemidiya yoluntu.
Imfundo noQeqesho kwezeNtlalo
I-Agorapulse Academy ilungele abathengisi abatsha kwimithombo yeendaba zentlalo okanye abafuna ukongeza ulwazi lwabo olukhoyo ngekhosi yezifundo ezihlaziyiweyo. Eyona nto ibaluleke kakhulu, isikolo sesikolo Indlela emfutshane (lelo khosi lesidlaliso) elidibanisa iqonga nezicwangciso zenkampani okanye zabasebenzi ekufuneka ziphumelele.
Ikhosi idibanisa iividiyo kunye neenkokheli zeshishini, izinto zokufunda, emva koko zikusebenzise ngokusebenzisa iqhinga okanye iqhinga kwiqonga leAgorapulse. Nazi izahluko:
Izixhobo zoPapasho lweNtlalo - esi sahluko sibandakanya ukupapasha kwiprofayili enye okanye ezingaphezulu, ukucwangciswa nokulawulwa kwezithuba ezicwangcisiweyo, ukwakha amaqela okupapasha ngokwesiko, imigca kunye nokulawula izithuba zemigca, ukulayishwa komxholo omninzi, ukuhamba komsebenzi weqela, iikhalenda ekwabelwana ngazo, ukusebenzisa iilebheli zokunika ingxelo, kunye nokusebenzisa usetyenziso lweselfowuni kunye nokwandiswa kwe-chrome .
Ukulawula iincoko zasekuhlaleni -Ibhokisi yemiyalezo yemidiya yoluntu, ukuqokelela izimvo zentengiso, ukuthatha amanyathelo ngeefilitha, iimpendulo kunye nokuphononongwa, ukugcina iimpendulo, ukubhala iileyibhile, ukubhukmaka, ukufihla, kunye nokunikezela iimpendulo, usebenzisa umncedisi webhokisi engenayo, kunye nabasebenzisi beprofayili.
Ukunika ingxelo ngemidiya yoluntu -Ukujonga iingxelo, ukuthumela ngaphandle iingxelo, ukusebenza neelebheli, kunye nokwakha iingxelo zamandla.
Imithombo yeendaba kwiNtlalo -Ukumamela yinethiwekhi yemidiya yoluntu (ngaphandle kwe-Facebook kunye ne-LinkedIn engayi kuyivumela), ukubeka esweni kunye nokuhlaziya imvakalelo, ngokukhankanywa kwiprofayile yakho, ngokukhankanywa ngokungekho semthethweni, okanye ngegama eliphambili, nge-URL, kunye nokulawula iziphumo zakho zokumamela.
Isahluko ngasinye siphela kwimibuzo yokuziqhelanisa (engachaphazeli uviwo lwakho lwesatifikethi) kodwa sikunike ulwazi onqwenela ukuphinda uluthathe. Kukwakho nemisebenzi ekhuthazwayo yokuba ungene kwiakhawunti yakho yeAgorapulse ukuze uyithathe.
Olu vavanyo lweemviwo luvavanya ulwazi lwakho lwezinto ezibalulekileyo ze urhwebo eendaba zentlalo ukuba bonke abasebenzi beendaba zentlalo kufuneka bazi. Ukuphumelela olu vavanyo kunye nokufumana isatifikethi sakho kuya kukuvumela ukuba ubonise izakhono zakho kunye nobungcali kumajelo asekuhlaleni kwaye ube yingcali yeAgorapulse.
Ndithathe ikhosi namhlanje kwaye Ndingu (ngokusemthethweni) ingcali yeAgorapulse!
Bhalisela ngoku iAgorapulse Academy
Ukubhengezwa: Ndingummeli we-Agorapulse kunye noMdibanisi.
tags: iziqinisekisoisatifikethi semidiya yoluntuiiklasi zosasazo zasekuhlaleniikhosi yemidiya yoluntuimfundo yemidiya yoluntu
Isoftware njengenkonzo (i-SaaS) yezibalo zeNqanaba leChurn ye2020
Lixesha lokunyusa iRSS feed yakho kwabafileyo
Okt 25, 2011 ngexesha 5:46 AM